မြန်မာပြောဂျပန်စကား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » မြန်မာပြောဂျပန်စကား
Posted by koaung on Dec 26, 2012 in Aha! Jokes, Satire, Society & Lifestyle | 29 comments
မောင်ကိုကဂျပန်ကိုစရောက်လာချိန်မှာဘဲ ဂျပန်သူဌေးကြီးကစပွန်စာပေးပြီး ခေါ်ထားတဲ့အခြား မြန်မာတယောက်ကို မောင်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ် သူ့နာမည်ကကိုမျိုးတဲ့ အသက်က၃၀ကျော်မောင်ကိုထက် ၇နှစ်ကြီးသလို
သူကအိမ်ထောင်သည်ပေါ့ မောင်ကိုကနိုင်ငံခြားဘာသာစကားကို လေ့လာခဲ့ပေမဲ့ဂျပန်ဘာသာမှာ အားမရခဲ့ပါဘူး ကိုမျိုးကတော့ဂျပန်ဘာသာကို အင်တာနေရှင်နယ် ဖောရင်းလမ်းဂွစ် ဆိုတဲ့ကျောင်းဆင်းကြီး ပေါ့ဗျာ ဂျပန်ကိုရောက်ကာစပေမဲ့ မြန်မာပြည်မှာတော်တော်လေးလေ့လာထားလို့ ဂျပန်စကားကိုရော စာကိုပါ တော်တော်လေး ကျွမ်းကျင်ပါတယ် မောင်ကိုမေးသမျှကိုလည်း အလျှင်းသင့်သလို ကိုမျိုးက ဘာသာပြန်ပေးတတ်ပါတယ်
ဂျပန်ရောက်ပြီးသူဌေးက သူ့ရဲ့စက်ရုံဝန်းထဲမှာနေစေပြီး ထမင်းစားရင်လည်းအတူစားလေ့ရှိပါတယ် ရောက်ကာစဆိုတော့ မောင်ကိုလည်းကိုမျိုးကိုဆရာတင်ပြီး ကိုမျိုးခိုင်းသမျှကို လုဎ်ပေးခဲ့ပါတယ် သူဌေးရဲ့ဇနီးက ဈေးဝယ်
ချက်ပြုတ်ပြီး ကိုမျိုးနဲ့မောင်ကိုက ထမင်းစားပွဲအဆင်သင့်ဖြစ်အောင်ဝိုင်းဝန်း ပြင်ဆင်ပေးရပါတယ် ဒါနဲ့ တနေ့မှာ ကိုမျိုးကထမင်းစားဖို့ ဘီရိုထဲကထမင်းစားပန်းကံ တွေကိုထုက်နေတုံး ဂွမ်းးးးးးးးးး ဆိုတဲ့ အသံနဲ့ ဘီရိုမှာတတ်ထားတဲ့မှန်ချပ်
ကျကွဲသွားပါတယ် အဲဒီအသံကိုကြားတဲ့ သူဌေးကတော် ဟာမီးဖိုချောင် ထဲ ဝင်လာပြီး ဒရေ (ဘယ်သူလဲ)(ဘယ်သူလုဎ်တာလည်း) လို့ မေးပြီးဝင်လာပါတယ်
အဲဒီအချိန်မှာကိုမျိုးက ဂျပန်လိုရေရေလည်လည် ပြန်ပြီးဖြေလိုက်ပြောလိုက်တာက တော့ မောင်ကိုအတွက် တသက်စာမေ့မရတဲ့ မြန်မာသုံးဂျပန်စကားက
“”””” ဝါတာရှီ ထိရုံဘဲထိတာ သူ့ဘာသာသူကျသွားတာပါ”””” လို့မောင်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ် အဲဒီအချိန်မှာ မောင်ကိုကကိုမျိုးကိုပြောလိုက်တာကတော့ ဆရာရယ်ဆရာ့ဂျပန်စကားက ဂျပန်တွေနားလည်
မလည်မသိဘူးဗျာ ကျနော်ကတော့ရှင်းသွားတာဘဲ လို့ရီရင်းပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်တဲ့
အမှန်ကိုမျိုးပြောသွားတဲ့ စကားစုထဲမှာ ဂျပန်စကားဆိုလို့ ဝါတာရှီ ဆိုတဲ့စကားလုံးတလုံးသာပါကြောင်း ဝါတာရှီ=ကျနော်/ကျမ
ကမ်းပေ့အချောက်ကျော်ချက် (ပင်လယ်စာပါ) စားကြပါဦးလား
ကျန်းမာကြပါစေ လေးစားလျှက် မောင်အောင်
ယောက်ျားအင်အားကို အထူးတိုးပွားစေတဲ့ အစားအစာထဲမှာ ပဲကောဟာ တော့တန်းစာရင်းဝင်မို့ 
ဓါတ်ပုံကြည့်ပြီး သွားရည်တမြားမြားကျသွားပါတယ် ဦးလေးအန်ကယ်အောင်ရယ်
ကိုပေ ပိုင်白 ကော်果 လို့ ခေါ်တယ်ဗျ များများစားရင် နှာခေါင်းကသွေးယိုတတ်သလို မကောင်းပါများများ မစား
သင့်ပါ ဆရာ့အသံထွက်က ယူနန် တရုတ်အသံပေါက်နေတယ် မန်လေးရောက်ရင် လာခေါ်မယ်နော်.
၀မ်းဒေး လေကြီးမိုးကြီး ၀ုန်းဒိုင်း …… ဆိုတာက ကြားနေကျဆိုတော့ ရိုးသွားပြီ။
ဝါတာရှီ ထိရုံဘဲထိတာ သူ့ဘာသာသူကျသွားတာ …………….. ဆိုတာက အသစ်အဆန်းမို့ မှတ်သားသွားပါတယ်။
နောင် သူများတွေကို လူလည်ကျပြီး ဟာသလုပ်ရအောင် :harr:
မမခင်ဗျား တကျောင်းတဂါထာ တရွာတပုဒ်ဆန်းပေါ့ဗျာ ကိုယ်တွေ့ကိုသတိရလို့ ရေးကြည့်တာပါ ဒိရောက်တော့လည်းရန်ဂုံ တရုတ်လေ စာစကား လေ့လာမှူနဲခဲ့တယ် ဂျပန်စာလေ့လာခဲ့သမျှနဲ့ ရောမွှေသမပြီးအသက်ရှင်ရပြန်တယ်
ဒီမှာအလုဎ်ထဲမှာ အနိမ့်အမြင့်ကဆာတီဖီကိတ် ရှိမှ တဆင့်ပြီးတဆင့် မြင့်ဘို့ရောမွေသမပြီး ကျုတ်ကျက်လိပြီးကျိုးစားခဲ့ရတယ် ခုဒေါ့လဲ ဝါတာရှီ နေကန်းသွားပါတယ် လေးစားလျှက်
ငါး ဟင်း နှစ်ပုံ ကူးသွားတယ်။
ချက်နည်းလေးများ အကြမ်းဖျင်းသိရင် တစ်ဆိတ်လောက်………
မခိုင်ဇာခင်ဗျား (အပေါ်ကပုံ) ငါးတွေပေါင်းတဲ့အခါ ငါးကြီးရင်အလည်ကျောရိုး မှာ ဒါးနဲ့နက်နက်ခွဲပေးပါ(အကျက်မြန်အောင်ပါ)ငါးကိုရေစင်အောင်ဆေးရပါတယ် အပြင်ကအကြီးခွံတွေ သန့်အောင်ဆေးသလို ဝမ်းဗိုက်ထဲကအမဲရောင် အရိအရွဲများလည်း စင်အောင်ဆေးရပါမယ် ဒါမှငါးငြီနံ့ကင်းစေပါတယ်
ပြီးမှဆားအနဲငယ်နဲ့ဖြူးပြီ အသားထဲဝင်အောင်ညင်သာစွာပွတ်ပေးရပါတယ် ဆားများဖို့မလိုအပ်ပါ ပြီးမှအပေါ်ကအရက်ကိုဖြန်းပေးရပါတယ် ပြီးမှအငံဓတ်ရှိတဲ့ခရုဆီ ဖြစ်ဖြစ် ပဲငပိ ကိုကြိုက်တာ အနယ်ငယ်တင်ပါ ပြီးမှအပေါ်မှာ
ကြက်သွန်ဖြူနုပ်နုပ် စင်းကိုအနဲငယ် ဂျင်းအနဲငယ် ကြက်သွန်မိတ်နဲ့ရောပြီး ပေါင်းအိုးထည်းထဲ့လို့ရပါပြီ ငါးကြီးရင်မိနစ်၃၀ ငါးလတ်ဆိုမိနစ်၂၀ပါ
အချိန်ပြည့်လို့ပေါင်းပြီသား ငါးပေါ်မှာ အရွက်စိမ်း((မြန်မာလိုမခေါ်တတ်))(ကိုယ်စားချင်တာ အဆင်ပြေတာကို)နုပ်နုပ်စင်း ငရုပ်သီးအနဲငယ်နဲ့တင်ထားပြီး ဆီပူ ၂၀၀ဒီဂရီအနည်းငယ်လောင်းချရင် အနံ့အရသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ငါးပေါင်းကိုစားလို့ရပါပြီ
(အောက်ကပုံ) ရေခဲဖရိုးစင်းငါးပါ ရေထဲမှာအအေးပေါ့အောင်လုဎ်ပြီး အချပ်လိုက်ဖြစ်အောင်လှီးပေးပါ ဆားအနဲငယ်အရက် ငရုက်ကောင်းမှုံရောသမပြီး ၁၅မိနစ်စိမ်ထားရပါတယ် အချိန်ပြည့်ရင် ဦးမှာဆီအနဲငယ် ကြက်သွန်ဖြူနုပ်နုပ်စင်း အနယ်ငယ်ကိုကျော်ပါ ရွှေဝါရောင်သန်းလာရင် ကောက်ညင်းအရက် ကောက်ညင်းအနဲငယ် အရက်အနဲငယ်နဲ့ မီးသေးသေးနဲ့၁၀မိနစ်ကြာထားပါ အိုးချပြီးနံနံပင်အုက်လိုက်ရင် စားလို့ရပါပြီ လေးစားလျှက်
ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါသည်။ :hee:
ဟုတ်ကဲ့ပါရပါတယ် ရီစရာကောင်းတာက မြန်မာပြည်မှာထမင်းကောင်းကောင်းမချက်ဘူးတဲ့လူက
အလုပ်မှာ သူဌေးဖြစ်သူက တာဝန်ပေးလို့ဘွဲ့ လွန်ဘွဲ့ ရတွေ ကိုလုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းတာဝန်ခံသင်
ရွှေဝါရောင်သန်းလာရင် ကောက်ညင်းအရက် ကောက်ညင်းအနဲငယ် အရက်အနဲငယ်နဲ့ မီးသေးသေးနဲ့၁၀မိနစ်ကြာထားပါ
နိုင်ငံခြားရောက်တော့.. ချိုင်းနီးစ်၊ဂျပန်..။ကိုရီးယား အစာတွေ”ကပ်”ရင်.. တီးသမှ..ကြိုက်မှကြိုက်..
၀ါတာရှီ သွားရည်တများများနဲ့ အားပေးသွားတယ်နော်… :harr:
၀ါတာရှီမို့ ဗိုက်ဆာတယ် ဒက်စ်ရော။
moonpoem ဒိုးမိုအရီဂတ်တိုး ဝါတာရှီ ကျေးဇူးအများကြီးအားကြီးတင်တယ်နော
တိုကျိုမှာ.. ပလက်ဖောင်းကနေ..ရထားစောင့်ရင်.. ရထားလာမလာ…မသိတာမို့.. ခေါင်းထွက်မျှော်စရာမလိုပါဘူးတဲ့..။
ကိုယ်စီးတဲ့ပလက်ဖောင်နံပါတ်မှတ်.. ဥပမာ..ပလက်ဖေါင်းနံပါတ်၂ဆို.. ဂျပန်လို “နိ”.. ဆိုတာသိထားပြီး..
“ပါမုန့်၂ခု.. ” “နိ”ဆိုတာနဲ့.. ပလက်ဖေါင်း၂ကိုရထားဝင်လာတော့မယ်မှတ်ပါတဲ့လေ..
“မာမို့နကု နိဘန်းဆင်န်းနိ ဒင်န်းရှဂ မအဲရိမတ်စ်၊” ပါ…။
( မကြာခင် ပလက်ဖေါင်းနံပါတ်၂ဆီကိုရထားလာပါမယ်။ )
“Mamonaku nibansen ni densha ga mairimasu.（間もなく2番線に電車が参ります。..
Gochisousama (Thanks for the Meal!)
သူကြီးခင်ဗျား ဂျပန်ရောက်ကာစပထမဆုံး စားတဲ့ထမင်းဘူးထဲမှာ ဝါစားဘိ (ငါးနဲ့တို့စားသောအရာ) စားမိလို့ တော်တော်အံ့ဩသွားတယ် ဒါက စားစရာလားလို့ တောင်သံသယ ဖြစ်မိတယ်
ဂေါ်ဂျူးရင်ခုဒါဆိုဒ် (သတိထားပါ) ကိုဂေါ်ဂျူးရန်းခုဒါဆိုဒ်(ယန်း၅၀ပေးပါ) ပြောကြတာ လုံပနီ(ပကန်လုံး) နဲ့ အိုမိုလီ(များများ မောက်မောက်)
ဒါပေမဲ့မြန်မာတွေရဲ့ အသံထွက်ကိုဂျပန်တွေ တော်တော်သဘောကျကျပါတယ်ဗျာတွေ့ဘူးတဲ့ဂျပန်တိုင်းလွမ်းမိတယ် ထိုင်ဝမ်ကလူတွေထက်ရိုးသားကူညီတတ်ကြတယ်
မြန်မာပြော ဂျပန်စကားတော့ မကြားဖူးဘူး။ email ထဲကိုရောက်လာတာလေးတစ်ခုတော့ ဖတ်မိတယ်။ စင်္ကာပူလေဆိပ်မှာ immigration officer ကရစ်တော့ အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက် စိတ်မရှည်ပဲ ပြောလိုက်ပုံက “This is my hot. Not your hot” တဲ့လေ။ ဒါငါ့အပူ နင့်အပူမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောတာပါ။
mashwetote ကြားဘူ:မယ်ထင်ပေမဲ့ ပြန်လည်ဆန်းသစ်ပါရစေ
တခါက တိုးဂိုဒ်တယောက် ရွှေတိဂုံဖုရားမှာ တိုးရစ်ကိုလှည့်လည် ရှင်းပြနေပါတယ် အဲဒီအချိန်မှာ
ထိုင်တော်မူနေတဲ့ဖုရားကိုတွေ့ဒေါ့မေးပါတယ် ဝှပ်အစ်သစ် (ဒါဘာလည်း)
တိုးဂိုဒ် က သစ်အစ်စစ်တင်းဘုက်ဒ(ထိုင်နေတဲ့ဖုရား)လို့ပြန်ဖြေပါတယ်
တိုးဂိုဒ် က စတန်းဒဲန်းဘုက်ဒ(ရပ်နေတဲ့ဖုရား)လို့ပြန်ဖြေပါတယ်
နောက်တခါလှဲတော်မူ နေတဲ့ဖုရားကိုတွေ့ဒေါ့ စလစ်ပင်းဘုက်ဒ(အိပ်နေတဲ့ဖုရား)လို့ဖြေပါတယ်
နောက်ဆုံးတိုးရစ်က မြတ်စွာဖုရားနောက်လိုက်များနဲ့ သပိတ်ပိုက်ပြီးကြွလာတဲ့ပုံကိုမေးဒေါ့
တိုးဂိုဒ်က သပိတ်ကိုရုက်တရက် ဘယ်လိုခေါ်ရမှန်းမသိတာနဲ့ အလွယ်တကူဖြေလိုက်ပုံက သစ်အစ်ဂိုးကီပါဘုက်ဒတဲ့(ဘောလုံးဖမ်းတဲ့ဖုရား)လို့ဖြေလိုက်ပါတယ်တဲ့ ကြားဘူးနားဝပါ
၀ါတာရှီ ၀င်ရောက်လေ့လာ အားပေးသွားပါဂျောင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ဟုက်ကဲ့ ကိုလူချော မိုဘိုင်းရေ ဒိုးမိုနဲ (သိုင်းကျူး)
အိုကြီး /အိုမ (အိုဂျီး)/(အိုဘား) စံ လဲ ဝင်အားပေးသွားပါကြောင်း ကိုအောင်ရေ့။ :hee:
မလိမ်မိုးမလိမ်မာမို့ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ စိတ်မောလူမောအလုပ်ပါမောလို့ အားရင် အရင်ကမြင်ခဲ့တာတွေသတိရပြီး စာရေးကြည့်တာပါဗျာ လေးစားလျှက်
私もうつきたありがと I also like and thanks
ဝါတာရှီ ခညားဂို ယောက်ဂထီး တော်ဘာရစေ …
အိုက်ဒါရော ရှင်းဒလားဟင်င် …
အားလည်း ပေးရင်း ..
ပြုံးလည်း ပြုံးရင်း …
ဝါးဒီးလည်း ဆွဲရင်းနဲ့ပေါ့ဗျာ ….။
လူလေးအန်စာတုံး အီကြာကွေးမစားချင်ပါနဲ့ကွယ် အခန့်မသင့်ရင်သွားကြားညပ်တတ်တယ် ဘူးသီးကျော်ဘဲစဉ်းစားပါကွယ် ကလေးကျောင်းစာရိတ်သာမရှိရင် ဪစီကမြန်မာသူဌေးကြီးပြောသလို မြန်မာပြည်ကိုတလတခါပြန်ဘို့
စဉ်းစားလို့ရတာပေါ့နော သူဌေးလုဎ်တာလွယ်တယ် ကွဲ့ သူဌေးဖြစ်အောင်လုဎ်ဖို့သာခက်တာ ရိုးရိုးသားသား ကြိုးကြိုးစားစား ဖြစ်ဖို့ဘဲလိုပါတယ်ကွယ် ခင်မင်လျှက်
အဓိပ္ပါယ် မပေါက်တော့ဘူး ……။
ဆိုလိုတာ ဘာမှန်းလည်း မသိတော့ဘူး ….။
နောက်တာပါကွယ် စကားပြောရင်း အတွေးလွဲတယ် ဘဲ ပြောကြစို့ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနောက်နောက်ပြောင်
ပြောင်ဘဲ ကောင်းပါ ရဲ့
“”””” ဝါတာရှီ ထိရုံဘဲထိတာ သူ့ဘာသာသူကျသွားတာပါ””””
ဟိ ဟိ မိုက်တယ် ဒီကတရုတ်တွေကိုလည်း အဲလိုပြောရင်ကောင်းမလား
ရွှေကြည်ရေအားပေးတဲ့အတွက် 謝謝 နော်